အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားဟာ နိုင်ငံတကာသုံး ဘာသာစကား ဖြစ်တော့ ဘာသာစကားမတူတဲ့ လူမျိုးအချင်းချင်း ဆက်သွယ်တဲ့ နေရာမှာ ကြားခံ အဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ သုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မွေးကတည်းက ပြောလာတဲ့ ဘာသာစကားမဟုတ်တော့ လေယူလေသိမ်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာ တလွဲတချော်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ရောက်တဲ့ အချိန်က စပြီး တမျိုးနဲ့ တမျိုး မရိုးနိုင်အောင် ကြုံရပါတယ်။
ပထမဆုံး ကြုံဖူးတာတော့ ပေါ်လီမှာ ပထမနှစ် တက်တုန်းကပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို လျှပ်စစ်ရဲ့ သဘောတရား ဘာသာရပ် သင်တဲ့ဆရာက အိန္ဒိယကလာတဲ့ ဒေါက်တာ တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ အတန်းကို စတက်ခါစက သူအမြဲ ပြောနေတတ်တဲ့ ဝိုးတေ့ နဲ့ ဂျီးရိုး ဆိုတာ ဘာပြောမှန်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့ မရပါဘူး။ သူပြတဲ့ ဆလိုက်ကို ကြည့်မှပဲ ဝိုးတေ့ ဆိုတာ Voltage ကို အသံထွက်မှန်း ဂျီးရိုးဆိုတာ zero လို့ ပြောမှန်း သဘောပေါက် ပါတော့တယ်။ ဇီးရိုးကို ဂျီးရိုးလို့ အသံထွက်တာတော့ အိန္ဒိယတွေတင် မကပဲ အင်ဒိုနီးရှား အချို့လည်း ပါပါတယ်။
နေရာဒေသ ကွဲပြားသွားတော့ လေယူလေသိမ်းတွေက ကွဲသွားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောနေပေမယ့် တချို့ အရပ်ဒေသက လူတွေ ပြောတဲ့ လေယူလေသိမ်းကို နားလည်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ တစ်ခါက ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ တောင်အာဖရိက ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ အကူအညီပေးဖို့ ကြိုးစားဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သား ၅ မိနစ်လောက် ကြိုးစားပမ်းစား ပြောကြပေမယ့် ဟဲလို ရက်စ် နိုး ဆိုတာ လောက်ပဲ အသံဖမ်းလို့ ရပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ သူပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားကို ကျွန်တော် နားမလည်သလို ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားကိုလည်း သူနားမလည် ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ နှစ်ယောက်စလုံး လက်လျှော့လိုက်ပြီး အီးမေးလ် အပြန်အလှန် ပို့ပြီး ပြောဖို့ သဘောတူညီချက် ယူလိုက်ကြ ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှပဲ အဆင်ပြေ ပါတယ်။ အီးမေးလ်ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်ရေးသမျှ သူနားလည်သလို သူရေးသမျှလည်း ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။
အချို့အမေရိကန်တွေ ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား ကလည်း အသံဖမ်းရတာ ခက်ပါတယ်။ တစ်ခါက လေယာဉ်ပျံ နောက်ကျလို့ မလာဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အမေရိကန် ရုံးက အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ကို ဖုန်းနဲ့ လှမ်းပြောပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့အတွက် အချိန်းအချက် လုပ်ကြတဲ့ အခါမှာ လိုရင်းကို မရောက်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ပြောတဲ့ လေယူလေသိမ်းကို နောက်တစ်ယောက်က နားမလည်တာနဲ့ပဲ တိုင်ပတ် နေကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ လက်လျှော့ပြီး SMS(Text) ပဲ အပြန်အလှန် ပို့ကြပါတော့တယ်။ SMS နဲ့မှပဲ အဆင်ပြေပါ တော့တယ်။
လေယူလေသိမ်းပြီးတော့ နောက်ပြသနာတစ်ခုက စကားလုံးအသုံးအနှုန်း ကိစ္စပါ။ ကိုယ့်ဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်လို တိုက်ရိုက်ပြန်ရင် တစ်ခြားသူတွေ နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေ အချင်းချင်း နောက်ပြီး ပြောလေ့ရှိကြတဲ့ This is my hot, not your hot (ဒါငါ့အပူ မင်းအပူ မဟုတ်ဘူး၊) နောက်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာ အမြဲ ပြောလေ့ ရှိတဲ့ Hammer Hammer Water Bamboo (တူတူရေဝါး)၊ two body tiger (နှစ်ကိုယ်ကြား) ဆိုတာတွေလောက် မဆိုးပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့ ဒေသသုံးတဲ့ စကားကို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ရေးတော့ အဓိပ္ပါယ် ကောက်ရခက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ခါက ကျွန်တော်တို့ ဟန်ဂေရီကို စက်တလုံး ရောင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီစက်က စက်ရုံရောက်သွားပြီးတော့ တစ်ပတ်လောက် ကြာတဲ့ အထိ ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဟိုနေရာပြင် ဒီနေရာပြင် လုပ်နေရတုန်း ပါပဲ။ အဲဒါနဲ့ ဟန်ဂေရီ စက်ရုံက အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ကို အီးမေးလ်ပို့ပြီး ပြသနာ ရှာပါတယ်။ သူရေးထားတဲ့ အီးမေးလ်က ကျွန်တော်တို့ ဥရောပရုံး၊ စင်ကာပူရုံးမှာ ရှိတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ မန်နေဂျာ တွေဆီကို ကော်ပီအနေနဲ့ လာပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီ ပရော့ဂျက်မှာ ပါနေတော့ ကျွန်တော့်ဆီကိုလည်း ကော်ပီတစ်စောင် ရောက်လာပါတယ်။ သူရေးထားတဲ့ အီးမေးလ်ထဲမှာ “I know we bought the banana product, but we don't expect this." ဆိုတာ ပါလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရောင်းလိုက်တာက စက်ပါ။ ဘယ်နှယ့်ကြောင့် ဟန်ဂေရီ ရောက်မှ ငှက်ပျောသီး ဖြစ်သွားရတာလဲ ဆိုပြီး စဉ်းစားရ ကျပ်သွားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ စက်ကလည်း ဘားကုဒ်ရိုက်တဲ့ စက်ပါ။ ဖျော်ရည်ဖျော်စက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ စက်နဲ့ ငှက်ပျောသီးကို ဆက်စပ်စဉ်းစားရင်း နောက်ဆုံးတော့ အီဒီယမ် တစ်ခု အနေနဲ့ သုံးတာဖြစ်မယ် ဆိုပြီး သဘောပေါက် သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် banana product ဆိုတဲ့ အီဒီယမ်က အဘိဓာန်ထဲမှာလည်း မရှိပါဘူး။
နောက်ဆုံး မနေနိုင်တော့ မန်နေဂျာကို လှမ်းမေးပါတယ်။ မန်နေဂျာက ငါလည်း အဲဒါစဉ်းစားနေတာ။ ဘာပြောတာလဲ မသိဘူး လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ နောက်တော့ ဥရောပရုံးက ဖုန်းလာတာနဲ့ စကားစပ်မိပြီး ငှက်ပျောသီး အကြောင်း သူတို့ကို မေးကြည့်ပါတယ်။ ဥရောပရုံးက အင်ဂျင်နီယာတွေ ကလည်း သူတို့လည်း အဲဒီ အီးမေးလ်ရတယ်။ ဘာအဓိပ္ပါယ် မှန်းတော့ မသိဘူးလို့ ဖြေပါတယ်။ နောက်တော့မှ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်က သူ ဟန်ဂေရီကို ဖုန်းဆက်ဖြစ်ရင် မေးပြီး ပြန်ပြောမယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးနဲ့ အားလုံး ပဟေဠိတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းပြောပြီး ခဏကြာမှ ဥရောပရုံးက အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်က ငှက်ပျောသီး ရှင်းတမ်းကို အီးမေးလ်နဲ့ လှမ်းပို့ ပေးပါတယ်။ Banana Product ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက ငှက်ပျောသီး ဆိုတာ အစိမ်း ဝယ်ပေမယ့် အချိန်တန်ရင် မှည့်ရတယ်။ အဲဒီလိုပဲ စက်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီမှာတုန်းက ကောင်းကောင်း အလုပ် မလုပ်ပေမယ့် စက်ရုံရောက်ရင်တော့ အလုပ် လုပ်ကို လုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်း ရေးထားပါတယ်။ အဲဒါ ဟန်ဂေရီမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားဖြစ်ပြီး အီးမေးလ်ပို့တဲ့သူက အင်္ဂလိပ်လို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်လိုက်တာ လို့လည်း ရေးထားပါတယ်။ နောက်တော့လည်း ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံတဲ့ အခါတိုင်း အချင်းချင်း Banana Product လို့ပဲ ပြောလေ့ ရှိကြပါတော့တယ်။
Posted by ZT at 3:26 PM
ဟားဟား... ကျွန်တော်တို့လဲ ငှက်ပျောသီးတွေ ရောင်းရောင်းနေရတာ။ ကြာပေါ့။
ကြိုက်သွားဘီ ငှက်ပျော်သီးထွက်ကုန်ကို ဟိဟိ။ ဗမာလိုပြန်ရင်တောင် ဘာမှန်း မသိဘူး။ ဒုက္ခ။
ဟား ဟား .. အခုမှ သတိထားမိတော့..။ ကျွန်တော်လဲ banana product တွေ တော်တော်လုပ်ခဲ့ဖူးပါလား ဆိုတော့ပေါ့။
banana product?? :D သူဟာသူတော့ ဟုတ်လို့... :)
NTU မှာကျောင်းတက်တုန်းက တရုတ်ဆရာတစ်ယောက် က + ကို ပေါ့ကျူ၊ - ကိူ
နစ်ကျူ လို့ထွက်တာ။ပထမတော့သူဘာပြောနေပါလိမ့် လို့ နောက်မှသဘောပေါက်တယ်။banana product ကိုသဘောကျတယ်။
အခုတော့ ငှက်ပျောသီးက အမှည့်လွန်သွားလို့ နောက်လူက လိုက်အဖတ်ဆည်နေရတယ်။ ဒါမျိုးဆို သေချင်စော် ပိုနံရော။ ဘယ်အမျိုးအစား ငှက်ပျောသီးဆိုတာကို ပုံဖမ်းလို့ မရအောင် ဖြစ်နေရင် သွားပြီ။ ခုလဲ ရက်လွန် ပုတ်သိုး ငှက်ပျောသီး နှစ်လုံး ပိုက်ဘော မိနေသည်။
သူ့ အဓိပ္ပယ်နဲ့ သူပေါ့
မနုကို မကြောက်ဘူး မနီကို ကြောက်တယ်ဆိုလို့လိုက်လာတာ
ဒီရောက်တော့ ဘနားနား ပရောဒတ်နဲ့တိုးနေတယ်..
ဖတ်လို့ ကောင်းပါ့.. း)